Ganacsatada Qaadka Kenya oo uu khasaarihii ugu weyne kala kulmay Qaadkii la keeni jirey Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ganacsatada Qaadka Kenya oo uu khasaarihii ugu weyne kala kulmay Qaadkii la keeni jirey Somalia
Dhowr Diyaarad oo uu ku rarnaa Shixnado Qaad ah oo loo soo waday magaalladda Muqdisho ayaan ka soo duulin Garoonka Wilson Airport ee magaalladda Nairobi, kadib markii ay Dowladda Federalka si KMG u joojisay Diyaaradihii Qaadka ka keeni jirey dalka Kenya.
Wargeyska kenya ah oo ka soo baxa Nairobi ayaa maanta qoray in Shixnadda Qaadka ee ku raran Diyaaradahaasilagu qiimeeyey lacag dhan 60 million oo Shillinka Kenya.
Kimathi Munjuri oo ah Afhayeenka Ururka Ganasatadda Qaadka Nyambene Miraa Traders Association ayaa u sheegay Wargeyska The Nation inuu Khasaaruhu ka sii badan karo Qaadkii loo iib geyn jirey Somalia.
Waxa uu tilmaamay inay Shixnadaha Xamuulka weli yaallaan Garoonka Wilson Airport, halka Qaad kalena uu dhooban yahay Xaafadda Islii, iyadoo shixnado kalena dib loogu celiyey Gobalka Meru oo ay ku yaallaan Beeraha ugu badan ee Qaadka Kenya.
Dhinaca kale, Afhayeenka waxa uu tilmaamay inay jiraan Diyaarado Qaad waday oo maanta ka degay Garoomadda Diyaaradaha Somaliland, Gaalkacyo iyo Bosaaso.
Si kastaba ha ahaatee, Ganacsatada Kenyanka ee DFiyaaradaha Qaadka maalin kasta u soo diri jireen gudaha Somalia waxay maanta u tahay Maalin Ayaan Daran ah, maadaama aysan helin macaashkii badnaa ee uga soo xeroon jirtay Diyaaradaha Qaadka ee ay maalin kasta u daabuli jireen Gudaha Somalia.
Ilaa 14 Diyaaradaha Yaryar ee nooa FOKERKA ayaa waxay maalin kasta Qaad u soo daabuli jireen Somalia, iyadoo Diyaarad kasta lagu soo rari jirey 90 Jawaan oo lagu soo cabeeyey Qaadka.